Halgamaa xuquuqda aadanaha oo ku howlan taageeridda dhibaneyaasha xadgudubka galmada ee Soomaaliya | UNSOM
01:02 - 19 Jan
Halgamaa xuquuqda aadanaha oo ku howlan taageeridda dhibaneyaasha xadgudubka galmada ee Soomaaliya
Waxaa uu ka mid yahay ragga fara ku tiriska ah ee u ololeeya xuquuqda haweenka ee Soomaaliya. Balse Geele waxaa uu aaminsan yahay in uu boos fiican joogo oo ku beddalo qaar ka mid ah fikradaha qaldan ee ku aadan jinsiga, dhaleecaynta iyo sawirada taban ee bulshada ka qabto xuquuqda haweenka. Tusaale ahaan waxaa uu ka hadlaa fikradda ah in ragga aan naagahooda garaacin ay daciif yihiin. Waxaa uu Geele sheegayaa in shaqaaqooyinka galmada ee ka dhanka ah haweenka ay fuliyaan ragga sida daraadeedna ay ka go’an tahay in uu ciribtiro falkaasi.
“Inagoo u marayna ololooyin wacyi gelin iyo kicin, waxaa aan la talin siinnaa dhibaneyaasha shaqaaqooyinka ku saleysan galmada iyo jinsiga. Wacyi gelinta bulshada ka soke waxaa aan sidoo kale isticmaalnaa idaacadaha raadiyaha si aan dadka u baarujinno. Dadaaladeenna waxaa ay saamayn weyn ku yeesheen bulshooyinka aan ka dhex shaqayno,” ayuu yiri.
Ololeeyaha ayaa dhibaneyaasha shaqaaqooyinka galmada ku booriya in aanay ka aamusin falalkaasi. Waxaa uu intaasi ku daray in muhiimdda ugu weyn ee ololaha baraarujinta hay’adda OSPAD uu yahay in ay ku dhiiri geliyaan dhibaneyaasha shaqaaqooyinka galmada in ay caddaalad ka raadsadaan nidaamka rasmiga ah ee caddaaladda inti ay ka raadsan lahaayeen dhexdhexaadin qabiil. Nidaamka caddaaaladda ee oday dhaqameedyada ma ahayn mid wax ku ool oo wax ka qaban kara shaqaaqooyinka galmada, ayuu yiri Geele.
“Waxaa jirtay hooyo dukaan ku haysatay tuulo ku taala gobolka Shabeelaha Hoose. Habeen ayaa dableey dukaankeedii jabsadeen oo ayna qaateen wax kasta, ka hor inta aayan iyada kufsanin ka dibna dileen. Waxaa ay ka tagtay dhallaan. Ma jirto cid loo xiray falkaasi foosha xun. Odayaasha waxaa ay ku guul dareysteen in ay aqoonsadaan oo ay ciqaabaan dadki dilkaasi geystay. Waa arrin naxdin leh,” ayuu soo xusuustay.
 Colaadda Soomaaliya: Khasaare ballaaran u geysata dadka rayidka, Al Shabaab ayaa ka mas’uul ah inta badan khasaaraha dadka rayidka – Warbixinta Qaramada Midoobay
 Madasha Iskaashiga ee Soomaaliya oo ballanqaad lagu sameeyay in dalka la siiyo taageerro la saadaalin karo oo waarta